China N, N-dimethylcyclohexylamine, FENTACAT 8, CAS NO. 98-94-2 ， DMCHA / PC8 fekitori uye vagadziri | Kerui Makemikari
CAS HERE. 98-94-2
Zita rekutengeserana: DMCHA / PC8
N, N-dimethylcyclohexylamine (FENTACAT 8, DMCHA, PC8) chinangwa chikuru chakaita senge chinokonzeresa kuomarara polyurethane mafomu. N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8） yakaderera-viscosity uye yepakati-inoshanda amine zvinokonzeresa zvinoshandiswa mafiriji, mahwendefa, kupfapfaidza, uye pane-saiti infusion yeyakaomarara polyurethane mafomu.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）ine simba rekubatsira pane gelation uye kupupa furo, uye inopa kuita kwakaringana kwekubatsira kwekupupa furo uye gelation kuita kweyakaomarara furo.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）ine simba rakasimba rekukonzeresa kuita kwemvura uye isocyanate (kupupa furo), uye panguva imwechete Kuita kwe polyol feather isocyanate zvakare kune zvine mwero catalysis.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8） yakasimba yakasimba yekutanga yekukonzera furo. Kuwedzera kune furo rakaomarara, inogona zvakare kushandiswa seyunobatsira inopupuma furo mumiririri yekuumba yakapfava furo uye semi-yakaoma furo. Iyo ine yakagadzikana kuita mune yakasanganiswa zvinhu, yakakura kugadziridzwa, uye -refu-kwenguva chengetedzo.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）rakazara muna 170 makirogiramu / dhiramu; inochengetwa munzvimbo inotonhorera uye ine mweya mukati meimba, yakachengetedzwa kubva kuhunyoro uye kusvikirwa nezuva. Nguva yekuchengetedza i12 mwedzi.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）kemikari synthesis yepakati zvinhu. Ndokumbirawo usabatane nemeso uye ganda panguva yekushandisa. Kana paine kusangana, ndapota sukurudza nemvura yakawanda uye ugozvitumira kwachiremba kunorapwa.